Khilaafka Madaxweynaha Iyo Raysal Wasaaraha Dawlada Somaliya Oo Xadhkaha Goostay Iyo Masuuliyiinta Xukuumada Oo La Kala Saftay | Cadceed newssite
Khilaafka Madaxweynaha Iyo Raysal Wasaaraha Dawlada Somaliya Oo Xadhkaha Goostay Iyo Masuuliyiinta Xukuumada Oo La Kala Saftay
Feb 23, 2013 Muqdisho(Cadceed) – Booqashada wafti ka socday waddanka Mareykanku ay ku tageen Muqdisho khamiistii ayaa banaanka soo dhigay khilaafkii warbaahinta qaar tabinaysay muddooyinkii ugu danbeeyay, kaas oo la shacinaayay inuu u dhaxeeyo Madaxweynaha dalka Somaaliya iyo Raysal Wasarihiisa.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Raysal wasaarihiisa Cabdi Faarax Shirdoon ayaa si yaabo kala duwan ula kulmay madaxa hay’adda gargaarka dalka Maraykanka, Dr. Rajiv Shah oo Muqdisho booqasho ku tagay. Madaxa USAID waxaa markii horre la kulmay Madaxweynaha Somaaliya iyo Wasiiru dawlaha Madaxtooyadda Faarax Macalin. Kulankaas oo qaatay dhawr sacadood ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa saxaafadda la hadlay Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Dr. Shaah.
Kulankaas waxaa looga dhawaaqay lacago hor leh oo dawladda Maraykanku siineyso Somaaliya, taasoo lagu horrumarinaayo arrimaha aasaasiga ah sida wax-barashadda, caafimaadka iyo beeraha.
Markii uu kulankaas dhammaaday waxaa saxaafadda loo sheegay in ay iska xaadiriyaan xarunta Villa Somalia, halkaasoo Madaxweynahu uu ku qabanaayo shir jaraa’id.
“Wariyaasha waa inay iska xaadiriyaan Villa Somaaliya oo uu ka jiro shir muhiim ah,” sidaas waxaa yidhi sarkaal ka tirsan xafiiska Madaxweynaha. Nin kale oo ka shaqeeya xafiiska Madaxweynaha ayaa yidhii “Maanta miyaydaan rabin shaqo, maxaad u qaban waydeen Villa Somaaliya oo shir muhiim ahi uu ka jiro”. Wuxuuna u muuqday hadalkaas ay labada masuul isaga kala danmeeyeen, mid lagu baabiinaayo shirka jaraa’id ee Raysal Wasaaraha iyo Madaxa hay’adda gargaarka Maraykanka oo iyana kulan gaar ah ku yeeshay mid kamid ah xafiisyada AMISOM ee Xallane.
Ka hor intaanu dhicin kulankaasi waxaa wariyaasha loo sheegay inuu jiro khilaaf ballaadhan oo ka dhexeeya Madaxweynaha iyo Raysal Wasaaraha. Khilaafkan ayaa soo billowday dabayaaqadii bishii hore, markaas oo labada masuul ay isku dhaceen, laakin maanta waxaa si buuxda u cadaatay in uu jiro is-maandhaaf ka dhex-jira labadooda, taasoo suurto gal ka dhigeysa in labadooda uu mid daaqada ka baxo.
Madaxweynaha iyo Raysal Wasaaraha hadda islama hadlaan oo xittaa isma salaamaan sida ay lee yihiin saraakiil ku dhow dhaw xafiiska labada masuul, waxaana arrintaais ay keentay in ay labo garab u kala jabaan xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya.
Wasiiradda xukuumadda yey kala taageersan yihiin?
Sida uu u cadeeyay saxaafadda sarkaal ka tirsan dawladda dalka Somaaliya, wasiiradda xukuumadda waxay la kala safteen Madaxweynaha iyo Raysal Wasaaraha, taasna wax ay soo shaacbaxday markii Madaxweynahu uu Raysal Wasaaraha ka codsaday inuu shaqada ka eryo Wasiirka Maaliyadda, dalabkaas Madaxweynaha oo uu gashaanka ku dhuftay Raysal Wasaare Saacid.
Cabdi Faarax Shirdoon ayaa ku hanjabay haddii hal wasiir shaqada laga xayuubiyo inuu xafiiska isna uu banayn doono. Wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Kariin Xuseen Guuleed waa gacanta midig isla markaana uu ku tashdo Madaxweynaha Somaaliya. Wasiirka arrimaha dibedda ahna Raysa Wasaare ku-xigeen waxay si weyn u tageersan tahay unala safantahay Raysal Wasaaraha, arrinkaas oo dhalisay in Madaxweyne Xasan Shiikh qorshaysto sidii uu uga takhalusilahaa Foosiya Xaji Aadan iyo Wasiiro kale.
Dhawaan ayuu Wasiirka arrimaha gudaha Somaaliya ka qayb galay aaska loo sameeyay Sheekh Cabduqaadir Gacmeen oo dhawaan kooxo hubeysan ay ku dileen magaalada Garowe ee xarunta Puntland.
Raysal Wasaarahu safarka wasiirka lamuu socon, loomana sheegin, iyadoo uu diray Madaxweynaha Xasan Shiikh. Iyadoo wakhtiga uu safarka galay Wasiirku ayuu Raysal Wasaaruhu ka codsaday inuu tago beerta nabadda oo ay ka dhaceysay banaanbax lagu taageerayo dawladda.
Wasiirka arrimaha gudaha ayaa Raysal Wasaaraha ku yidhi si lama filaan ah. “Waxaan ku suganahay Garowe Madaxweynaha ayaana ii diray marka ma joogo Muqdisho” Raysal Wasaaraha Somaaliya ayaa la sheegayaa inuu billaabay la xisaabtan uu ku sameeyay Madaxweynaha, isla markaana wuu ka codsaday inuu shaqadiisa u madax baneeyo. Haddii khilaafkan muuqda ee ka dhexeeya Madaxweynaha iyo Raysal Wasaaraha Somaaliya si rasmi ah u shaacbaxo wuxuu keeni karaa in beesha caalamka oo caawimo siida Soomaaliya ay ka niyad jabot wax yaabaha la soo darsay dawladii cusbayd..
Contact us : Cadceednews@gmail.com